DEGDEG..Inqilaab milatari oo ka dhacay wadanka Burundi + VIDEO. |
DEGDEG..Inqilaab milatari oo ka dhacay wadanka Burundi + VIDEO.
Boqolaal dad wayne ah ayaa isugu soo baxay badhtamaha magaalada Bujumbura ee caasimada wadanka Burundi iyaga oo u dabaal dagaya afgambi uu ku dhawaaqay Major General Godefroid Niyombare oo ka tirsan ciidamada wadanka,
Generaalka ayaa la wareegay madaxtooyada iyo inta badan telefishanada iyo radio yaha ,waxanu amar ku bixiyay in la xidho airport yada oo dhan si aanu madaxweynuhu usoo dagin.
Generalka oo ay hareero fadhiyeen saraakiil kale oo milatariga ka tirsan ayaa sheegay in aanu aqoonsanayn dawlada madaxweyne Pierre Nkurunziza,isaga oo ku eedeeyay inuu jabiyay dastuurka wadanka u yaala ka dib markii uu sheegay in uu utartamayo doorashada madaxtinimada ee lagu wado inay qabsoonto bisha soo socota.
Madaxweyne Pierre Nkuruziza ayaa ku maqan wadanka Tanzania ,halkaas oo uu kaga qayb galayay shirka wadamada bariga Afrika oo ay ku bahoobeen shanta wadan ee Kenya ,Uganda,Tanzania,Ruwanda iyo Brundi.
Madaxweyne Nkuruziza ayaa inqilaabka ku tilmaamay mid fashil ah waxanu si kooban u yidhi waa ay kaftamayaan.hase yeeshee diyaaradii siday madexwynaha oo isku dayay inuu dib ugu noqdo wadankiisa ayaa ku dagi kari wayday ,waxaanay dib ugu noqotay wadanka Tanzania.
General Godefroid Niyombare ayaa hore u ahaa taliyaha guud ee sirdoonka wadanka ,hase yeeshee waxa shaqadaasi ka caydhiyay madaxweyne Pierre Nkuruziza bishii February ee sanadkan.
Ugu yaraan 19 qof ayaa ku dhintay rabshado socday wiigagii u danbeeyay oo lagaga soo horjeedo madaxweynaha oo dastuurka furay si uu mar sadexaad madaxweyne uga noqdo wadanka.
Dhinaca kalena ninka ugu xooga badan mucaaridka wadankaasi Agathon Rwasa ayaa aad usoo dhaweeyay inqilaabka ,’’waan ku faraxsanay in la badbaadiyo wadanka iyo shacabka Brundi’’ ayuu yidhi ,isagoo la hadlayay Telefishanka Aljazeera.
Kala soco Gabiley.net waxii ksoo kordha wararka inqilaabka Burundi.